Haweenka | Radio Himilo | Page 4
Home / Haweenka (page 4)
Himilo FM –Dhibaatada, qaxa, dhimashada, dhaawaca, rafaadka iyo harjadka nolosha waxay kala simantahay ragga oo ah kuwo ku xeeran. Balse waxaa intaa u dheer ku dhibaateynta abuurista Alle oo uu kaga duway rijaalka. Ka warhaynta gabadha iyo u samafalkeeda waa ...
Mahad Mohamed March 16, 2019
Himilo FM – Way adag tahay markasta inaad jarto xiriirka jaceyl ee aad qof la wadaagto hase ahaatee in qofka ka been sheego naftiisa si uu u gooyo xiriirkaasi waa tallaabo aysan sameyn karin dad badan balse haweenay u dhalatay ...
Haweenay iska jartay gacan si ay u hesho lacag ceymis ah!
Himilo FM –Maamulka Slovenia ayaa shaaciyay in haweenay u dhalatay dalkaasi iska jartay gacan iyadoo adeegsanaysa minshaar si ay u hesho lacag ceymis ah. Booliiska ayaa tilmaamay in haweenayda oo 21 jir ah inay ku dhiiratay iyadoo kaalmo ka helaysa ...
Ciraaq: Gabar lagu mehriyay inka badan 1 Milyan oo doolar
Himilo FM –Rana Jamaal oo ah gabar u dhalatay dalka Ciraaq ayaa bog cusub looga qoray taariikhda dalkaasi kaddib markii lagu mehriyay 2 Bilyan oo Diinaarka dalka Ciraaq ah islamarkaana u dhiganta 1.7 Milyan oo doolar. Dukumenti ah la xiriira ...
Bilyaneerka Thailand ee Arnon oo ka baxay ballan ku saabsan guurka gabadhiisa!
Mahad Mohamed March 11, 2019
Himilo FM –Arnon Rodthong oo ah bilyaneer u dhashay Thailand ayaa ka baxay ballan qaad uu sameeyay oo la xiriira guurka gabadhiisa Karnsita islamarkaana soo jiitay dad fara badan. Ninka bilyaneerka ah ayaa goor sii horreysay u soo bandhigay gabadhiisa ...
Himilo FM –Haweenka waxay matalaan kala bar dadka caalamka hase ahaatee kama dhigna tiradan sida haweenka ku yihiin suuqa shaqada ama liiska maalqabeenada caalamka. Sidaasi oo ay tahay, waxaa jira haween tiro yar oo lagu tiriyo maalqabeenada dunida, waxaana liiska ...
La kulan – qofka ugu da’da weyn caalamka
Mahad Mohamed March 9, 2019
Himilo FM –Xaflad sharafeed weyn ayaa loo dhigay kaddib markay noqotay qofka ugu da’da weyn caalamka iyadoo da’deedu tahay 116 jir. Hay’adda Guinness World Records ee diiwaan gelisa rikoorada caalamiga ah ayaa si rasmi ah ugu aqoonsatay Kane Tanaka qofka ...
La kulan – Bilyuneerka ugu da’da yar caalamka
Mahad Mohamed March 6, 2019
Himilo FM –Kylie Jenner ayaa noqotay bilyuneerka ugu da’da yar caalamka sida ku xusan liiska bilyuneerada dunida ee Forbes. Gabadhan oo ah qofka ugu yar qoyska Kardashian Family ayaa hantida ka sameysay ganacsigeeda waxyaabaha la isku qurxiyo. 21 jirka ayaa ...
Bilyuneer guurka gabadhiisa kugu siinaya 300 kun oo doolar!
Mahad Mohamed March 5, 2019
Himilo FM –Go’aan si weyn loola yaabay ayuu noqday hase ahaatee gabadha aan wali guursan waxay noqon doontaa riyada rag badan oo caalamka ku nool. Nin bilyuneer ah ayaa u soo bandhigay gabadhiisa nin kasta oo doonaya inuu guursado iyadoo ...
Mahad Mohamed March 4, 2019
Himilo FM –Shirkada American Airlines ayaa raali gelin ka bixisay tallaabo uu mid kamid ah shaqaalaheeda kaga saaray diyaarada haweenay iyo cunuggeeda sabab la xiriirta midabka maqaarkooda. Warbaahinta Fox News ayaa ka soo xigatay shirkada inay ka xun tahay falka ...